USergey Yesenin. Izinkondlo mayelana nemvelo
Isihloko semvelo ezinkondlweni zika-Yesenin ungenye yezindawo zokuqala. Singasho ukuthi yiyona nto esemqoka yomsebenzi wakhe. Cishe kuzo yonke imisebenzi yakhe yomfundi umfundi angabona kahle futhi ngesikhathi esifanayo izincazelo ezingavamile zendalo yaseRussia. U-Yesenin wakwazi ukuveza ubuhle bemvelo yaseRussia efinyeleleka kakhulu kangangokuthi imisebenzi iyazama emphefumulweni kubantu abadala nakubantu abancane.
Uthando lwesibongo sezwe lakubo
Izinkondlo eziningi zanikezelwa ezweni lakubo yi-imbongi S. Yesenin. Izinkondlo mayelana nemvelo zihlala zihlangene nezinkondlo mayelana nezwe lakubo. Ngombongi, isithombe sezwe kanye nemvelo akuxhunyaniswe kahle. Ubona isimo saseRussia njengento ebuhle obungunaphakade nokuvumelana okuphakade kwezwe, okungaphilisa imiphefumulo yabantu. Emsebenzini wakhe u- Yesenin njengokungathi ucela umuntu ukuba ayeke okwesikhashana, ukubheka izwe elihle kunazo zonke, ukulalela ukhula lwezingca, ukuzwa izwi lomfula nengoma yomoya, ukugcina isibhakabhaka esinezinkanyezi noma ukuntwela kokusa okuqala ngosuku olusha.
Ezinkondlweni zika-Esenin, izithombe zemvelo zibonakala ziphila, ziphila. Abafundisi nje ukuthanda isimo sezwe lakubo, babeka isisekelo sobuhle bethu, le nkondlo yenza indoda ibe nomusa futhi ihlakaniphe. Phela, indoda ethande izwe lakubo kanye nemvelo yalo ngeke liziphikise. Ukumemezela isimo sakhe somdabu, ngenjabulo ethile egcwalisa izinkondlo zakhe u-Yesenin. Izinkondlo mayelana nemvelo zigcwala nje ngokugcwala, kunalokho okungalindelekile, kodwa ngesikhathi esifanayo. Umlobi ufanisa inyanga newundlu eliyindilinga, nesibhakabhaka sasebusuku ngotshani obuluhlaza:
Ngaphandle kwe-strand emnyama ye-peries
I-Lamb curly - inyanga
Ukuhamba ngotshani obuluhlaza.
Amazwi ka-Esenin ajwayelekile kakhulu ukwamukelwa komuntu, okuyinto imbongi eyisebenzisayo kaningi. UMdali wadala izwe lakhe eliyingqayizivele, ngaleyondlela wayephoqa umfundi ukuthi abone indlela inyanga ehambile yokugibela eyeke ngayo izaba, noma indlela umgwaqo udilika ngayo, noma ukuthi umuthi omncane we-birch ubheke kanjani echibini. In izinkondlo yakhe imvelo iphila, angazizwa, sadabukile futhi ujabule, uphazamiseke futhi kumangale.
Ngokuqondene nomlobi, uhlangana nemvelo, uzizwe yena enezimbali, izihlahla nezinsimu. Ukhuluma ngezimbali njengezilwane eziphilayo, ukhuluma nabo futhi uthembele izinsizi nezinjabulo zabo. Izenzakalo eziningi ezibalulekile empilweni ka-Esenin, kanye nokuhlangenwe nakho kwakhe ngokomzwelo, azihambisani kahle futhi zihlobene kakhulu nezinguquko zemvelo. Lapho imbongi isindayo emphefumulweni, umoya uphazamisa, amaqabunga awela, kepha lapho umphefumulo uzolile futhi ujabule, ilanga likhanya, kanti ukhula luvutha kancane.
Esikhathini sokuqalwa kokuqala, kwakuyikulumo yeSlavonic yeSonto ezinkondlweni zakhe uSergei Yesenin wasebenzisa. Izinkondlo mayelana nemvelo kwakuyi-fusion yezulu nomhlaba, futhi imvelo yayiwumqhele wale nyunyana. Emsebenzini wakhe imbongi iveza isithombe esinezimbala ezigqamile, sidlulisa isimo somphefumulo wakhe. Ngokwesibonelo, uchaza ukuntwela kokusa okuhambisana nokukhala kwama-Orioles nezinkuni, kodwa kulo mzuzu wanezela ukuthi akayikukhala, ngoba umphefumulo wakhe ulula.
Imvelo nobudala bomuntu bahlanganisa kanjani umbongi u-Yesenin
Izinkondlo mayelana nemvelo, imbongi ihlale ihlangene nesikhathi semuntu. Isibonelo, incazelo yentsha engakhathazeki ibonakala ibalabalabala, ekhanyayo, indawo ekhanyayo. Kodwa ukushintsha intsha, ukuvuthwa komuntu njalo kuza. Ezinkondlweni zakhe u-Esenin uqhathanisa lesi sikhathi nesikhathi sonyaka okuthiwa ngekwindla. Lesi yisikhathi lapho imibala ingapheli khona, kodwa, ngokuphambene nalokho, shintsha imithunzi yabo ibe yilabo abakhanyayo - igolide, obomvu, ithusi. Izinkondlo ezinjalo azigcini nje injabulo, kodwa futhi nokudabuka okufihlekile, ngoba imibala enjalo ekwindla yokukhanya iyigesi lokugcina ngaphambi kwebusika elide elizayo. Esikhathini esilandelayo sokudala sase-Esenin umuntu angazizwa edabukisayo, ephazamisekile nokufa okungazelelwe, okunikeza ukuhlaziywa okunembile kwenkondlo mayelana nemvelo. U-Yesenin ulangazelela intsha yakhe elahlekile, echaza isimo sakhe ezinkondlweni. Imizwelo enjalo ingabanjwa enkondlweni ethi "I-Golden Grove ixazululwe".
Imvelo ingumthombo wokuphefumulelwa
U-Yesenin ubona imvelo njengomunye naye. Kusemvelo ubona umthombo wokuphefumulelwa. Izwe kuphela lendabuko lakwazi ukunikeza imbongi nge-smart folk, isipho esimangalisayo nesimangalisayo. Umlobi osuka ebuntwaneni wezwa izinkolelo, izingoma, izingoma, kamuva okwaba umthombo womsebenzi ka-Esenin. Isimbongi sasithanda izwe lakubo, ubunjalo balo, kangangokuthi akukho ubuhle bamazwe asobude obude abuqede ukuthobeka okuthakazelisayo kwezikhala zaseRussia ezizalwa.
Ukuchaza indlela imbongi eyakhethiwe ngayo yamakhethwa amagama alula, kodwa azwakala njengengoma. Lokhu kwenza kube lula ukuba uzizwe ngokushesha futhi uzizwe wonke imizwa uJeenin ayefuna ukuyidlulisela. Izinkondlo mayelana nemvelo zithatha umsebenzi omkhulu wenkondlo, futhi lokhu kufakazela ukuthi uSergei Yesenin wayethanda ubuhle bezwe lakubo kangangokuthi kwakuyizinto zaseRashiya ezazithuthukisa kuzo zonke izingxenye zomhlaba.
Indaba "Gooseberries" Chekhov: isifinyeto esifushane. Ukuhlaziywa kwezindaba "Gooseberries" Chekhov
"I-Crane ne-heron" - inganekwane kanye nokuziphatha kwayo
Umlobi Ostrovsky Alexander Vladimirovich: biography nesithombe
I-Lermontov's lyrics isosha yomphefumulo wembongi
Iyini indaba yokubhala: incazelo, izibonelo
Izinhlamvu ezahlukene zencwadi mayelana no-Alice Selezneva
Siya eholidini ku-Kazakhstan. Shchuchinsk - indawo enhle yokuphumula
Stroller Baby Jogger City Mini - ukuthenga best kubalandeli lokuhamba izingane ehlathini zasemadolobheni!
Jigsaw "Makita": ukubuyekeza models ezimbili
Izimfihlakalo Anthroponymic: ukubaluleka igama Valery
I-UN likaNobhala: isakhiwo, ukubunjwa, umsebenzi
Indlela basuse amashiya ekhaya: amathiphu namasu
Cortex Prefrontal: imisebenzi. Ukuphulwa prefrontal cortex imisebenzi
Hake: okuqukethwe kwama-kilojoule. Heck: ukulungiselela kahle
Black amakati - panther encane
Uhlu - a inkimbinkimbi